२ लाखमा बलात्कार मुद्दा मिलाउन गाउँपालिका अध्यक्षकै दबाब,प्रम र मन्त्रीलाई उपसचिवको चुनौती ! (भिडियो) « NBC KHABAR
२ लाखमा बलात्कार मुद्दा मिलाउन गाउँपालिका अध्यक्षकै दबाब,प्रम र मन्त्रीलाई उपसचिवको चुनौती ! (भिडियो)
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३१८ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा श्रम मन्त्रालय अन्तगत श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरमा कार्यरत उपसचिव प्रेम प्रसाद सज्जेलको सरुवा प्र्रकरण विवादित बनेको छ । यस विषयमा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुका साथै उपसचिव प्रेम प्रसाद सज्जेलसँग कार्यक्रममा प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गरिएको छ ।
कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा निम्न रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छः
मालपोतका कर्मचारी कसरी घुस खान्छन् ?
सुनसरी । कोही सरकारी कर्मचारी सेवा अवधिको ४० वर्षसम्म घुस खाएको भन्न सक्ने एक जना देखाउ भन्ने हिम्मत गर्छन भने कोही कर्मचारी नापी कार्यालयमा नक्सा दिन समेत २÷३ सय रुपैयाँ घुस लिएर बेइज्जत गर्छन् । सुनसरी मालपोत कार्यालयमा मंगलबार यी सेवा ग्राही फाइल नक्सा निकाल्न पुगेको थिए । नापी कार्यालयमा फाइल नक्सा दिन फैसा लिने गरेको थाहा पाएपछि हाम्रा दर्शक राकेश निरौलाले उनलाई फलो गरे ।
कपिलवस्तुमा बलात्कार घटना मिलाउन गाँउपालिका अध्यक्षको दबाव !
कपिलवस्तु । कपिलवस्तु शुद्धोधन गाँउपालिकाकी एक बलात्कृत किशोरीलाई पीडकसँग मिल्न गाँउपालिकाका अध्यक्षले नै दबाब दिएको खुलेको छ । गत पुष ७ गते शनिबार बिहान गाँउपालिकाको वडा नम्बर २ मदारगढकी २१ वर्षीया किशोरीलाई सोही स्थानका ३० बर्षिय सोलिन्दर अहिरले जबरजस्ती करणी गरेको युवतीको आरोप छ ।
मन्टेशरीको दादागिरीः क्रिसमसको दिन सेन्टा सुट ड्रेस नलगाएको भन्दै विद्यार्थीलाई निकाले !